Nootropic Coluracetam: मस्तिष्कमा कसरी काम गर्ने र चिन्ताको उपचार गर्ने
/ब्लग/ग्यालरी/Nootropic Coluracetam: मस्तिष्कमा कसरी काम गर्ने र चिन्ताको उपचार गर्ने
प्रकाशित 03 / 17 / 2021 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
Nootropic– को रेष्टम परिवार कोलोराकुमम
कोलोरासिटाम (BCI-540, वा MKC-231) यौगिकहरूको रेसेटम-वर्गमा फ्याट-घुलनशील नूट्रोपिक हो। कोलोरासिटाम मूल रेष्टम भन्दा धेरै शक्तिशाली छ, Piracetam। कोलोरासिटाम २०० in मा जापानको मित्सुबिशी तानाबे फार्माले पेटेन्ट गरेको थियो। यसलाई नयाँ रेष्टम-आधारित नूट्रोपिक्स मध्ये एक बनाउँदै।
कोलोरासिटामको प्याटेन्ट पछि सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाको ब्रेनसेल, इंकमा बेचियो। ब्रेनसेल एक सानो, निजी-द्वारा आयोजित बायोफार्मास्यूटिकल कम्पनी हो जसले प्रमुख डिप्रेशनर डिसअर्डर (एमडीडी), उपचार प्रतिरोधी डिप्रेसन (टीआरडी), र अल्जाइमर रोगको उपचारको लागि कम्पाउन्ड विकास गर्न विशेषज्ञता राख्छ।
Coluracetam Piracetam जस्तै संरचनामा समान छ। र सबै रेसटम नूट्रोपिक्स जस्तै, यसको कोरमा पिरोलिडोन न्यूक्लियस छ। भर्खरको क्लिनिकल अनुसन्धानले डिप्रेशन डिसआर्डर, र रेटिना र अप्टिक स्नायु क्षतिको उपचारको लागि सम्भावित जनाउँछ।
Coluracetam एक धेरै मजबूत छ choline लक्षित supplement। यसले तपाईंको मस्तिष्कको choline रूपान्तरण Acetylcholine (ACh) मा उच्च affक्ति choline uptake (HACU) प्रक्रिया मार्फत बढाउँदछ। जसले सतर्कता बढाउँदछ, विस्तार र मेमोरीमा ध्यान।
केहि अनुसन्धान, र व्यक्तिगत अनुभव कोलुरासिटाम AMPA रिसेप्टर्स असर गर्न सक्छ देखाउँछ। यसलाई सम्भावित एम्पाकिन नूट्रोपिक बनाउँदै। जसले परम्परागत उत्तेजकहरूको साइड इफेक्ट बिना उत्तेजक-जस्तो प्रभावको वर्णन गर्न सक्छ। कोलोरासिटामले केहि एनिसियोलाइटिक (एन्टी-एन्सेन्सी) गुणहरू देखाउँदछ जसले मुड सुधार गर्न र शान्त चिन्तालाई सुधार गर्दछ।
कसरी Coluracetam काम(कार्य संयन्त्र)
सबै भन्दा ratam यौगिकहरु जस्तै, coluracetam (CAS:135463-81-9) मुख्यतया न्युरोट्रान्समिटर एसिटाइलकोलीनको स्तर बढाउँदै काम गर्दछ, जुन सीखने, मेमोरी र अनुभूतिसँग जोडिएको छ।
जे होस्, कोलोरासिटाम एसिटिचोलिन स्तरहरू परिमार्जित गर्ने तरिका अद्वितीय छ। सामान्यतया, रेसट्यामले उपयुक्त रिसेप्टर्सहरूलाई उत्तेजित गरेर एसिटाइलकोइन उत्पादनलाई ट्रिगर गर्दछ, तर कोलोरासिटामले उच्च-सम्बन्ध कोलोन अपटेक, वा HACU लाई बढाउँदै यस्तो गर्छ। एचएसीयू प्रणालीले दर निर्धारण गर्दछ जसमा कोलीन एसिटिचोलिनमा रूपान्तरणका लागि न्यूरन्समा कोरिन्छ।
कोलोनेसेटमले नर्व कोशिकामा कोरिएको दरलाई बढाउँदै कोलोरासिटामले एसिटिल्कोलाइन उत्पादनलाई बढावा दिन्छ र यस महत्त्वपूर्ण न्यूरोट्रान्समीटरको मस्तिष्कको स्तर बढ्न निम्त्याउँछ। यो उच्च-सम्बन्ध कोलोन ट्रान्सपोर्टर अणु CHT1 मा वृद्धि पनि देखाइएको छ, जसले नेतृत्व गर्दछ। अप्टेकको लागि कोलीनको द्रुत उपलब्धतामा।
यी कार्यहरूले सँगै एसिटाइलकोइनको उच्च स्तरमा लैजान्छ, जुन बृद्धि भएको अनुभूति र मेमोरीसँग सम्बन्धित छ।
लाभ र प्रभाव Of कोलोराकुमम
❶ Coluracetam मेमोरी र अध्ययन सुधार गर्दछ
कोलोरासिटाम बेनिफिट्स ईन्टेसनल र मेमोरी फंक्शन ईन्फोर्स गर्न काम गर्दछ जुन मुँहामा र यस्तै प्रभावहरू मानिसहरूलाई। ब्रेन सेल इंक। ले एक अध्ययन गर्‍यो जसले आठ दिनको लागि 64०० एए XNUMX ए प्राप्त गरेपछि मुसामा मानसिक सुधार आएको छ। विकास उपचारको पछाडि पनि रह्यो। अल्जाइमर रोग एसिटिचोलिनको तल्लो तहमा जान्छ। हिप्पोक्याम्पसमा एसिटिल्कोलान पाल्दा, कोलोरासिटामले अल्जाइमर रोगका लक्षणहरू बढाउँदछ जस्तै सिक्ने विकारहरू र कम मेमोरी।
❷ कोलोरासिटाम उपचार प्रतिरोधी प्रतिरोध कम गर्दछ
डिप्रेसनका साथ १०१ व्यक्तिको अध्ययनमा, जसले एन्टिडेप्रेसन्टहरूसँग नतिजा उपचार प्राप्त गरेनन्, यसले दिनमा 101 पटक mg० मिलीग्राममा जीवनको गुणस्तरमा भएको सुधारमा रचनात्मक प्रभाव पारे। यद्यपि मानवमा यो मात्र अध्ययन हो। ग्लूटामेट न्यूनतालाई कम गर्न क्षमता यो डिप्रेसन उपचारमा यसको सकारात्मक प्रभावहरूको लागि उत्तरदायी हुन सक्छ।
❸ Coluracetam चिन्ता कम गर्दछ
एक मुसा अध्ययनमा, २१ दिनको कोलोरासिटामले चिन्तामा २०% सुधार देखाउँदछ, जुन एउटै अध्ययनमा एकल डोजमा १२% प्रभाव भोलियम प्रभाव भन्दा बढी थियो।
❹ कोलोराकुमम न्यूरोजेनेसिसलाई बढावा दिन्छ
केही अध्ययनहरूले यो न्यूरोजेनेसिसको साथ मद्दत गर्ने उल्लेख गरे। प्राथमिक म्याकेनिज अझै स्पष्ट छैन, तर यसले यसको हप्ताको प्रशासनसँग सम्बन्धित छ, जुन हिप्पोकैम्पस क्षेत्रको एसिटिचोलिनमा वृद्धि हुन्छ। '' प्याटेन्ट्स भन्छ कि यसले स्नायु कोशिका बृद्धि (न्यूरोजेनेसिस) लाई बढावा दिन्छ। संयन्त्र अज्ञात छ, तर कोल्युरासेटम केहि हप्ताको लागि दैनिक डोज गरेपछि हिप्पोक्याम्पल एसिटिल्कोलीनको बृद्धिसँग सम्बन्धित छ भन्ने विश्वास छ। ''
❺ कोलोराकुमम स्किजोफ्रेनियाको साथ मद्दत गर्दछ
कोलोरासिटामले स्नायु सेल क्षति भएको मुसामा ChAT को गतिविधि बढाउँदछ। यस बृद्धिले सुझाव दिन्छ कि यसले स्किजोफ्रेनिया बिरामीहरूलाई पनि यही इन्जाइमको फाइदा लिन सक्छ। सिजोफ्रेनिया भएका व्यक्तिहरूमा सिधा थप अनुसन्धान भैरहेको छ।
❻ कोलोराकुमम नेत्रहीन बृद्धि गर्दछ
कोलोरासिटामले यसको अप्टिक शक्तिहरू देखाउँदछ जस्तै सुधारिएको र recognition्ग मान्यता, दर्शन, र जीवन्तता। विशेष रूपमा, यसले डिजेनेरेटिव रेटिना रोगको लागि स्नायुको बृद्धि गर्दछ। धेरै अध्ययनले राम्रो रंग र दृष्टि तिखार्ने उल्लेख गर्दछ, तर कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानले यी प्रभावहरूको पुष्टि गरेको छैन।
AASraw कोलोरासेटम को पेशेवर निर्माता हो।
कोलोरासिटाम दिमागमा कसरी काम गर्दछ?
कोलोरासिटामले दिमागको स्वास्थ्य र कार्यलाई धेरै तरिकामा बढावा दिन्छ। तर विशेष गरी दुई बाहिर खडा।
Coluracetam ले तपाईंको मस्तिष्कलाई बढावा दिन्छ'कोलोन अपटेक लक्षित गरेर र मस्तिष्कको न्युरोन्स मा उच्च affolity choline अपटेक (HACU) प्रक्रियाको साथ काम गरेर।
Acetylcholine (ACh) कोलीन र एसीटेट मिलेर बनेको छ। यी हर समय न्युरोन टर्मिनलमा उपलब्ध हुनुपर्दछ। ताकि AC जब यो आवश्यक पर्दछ संश्लेषित गर्न सकिन्छ।
रगतमा घुम्ने नि: शुल्क कोलाइन रक्त-मस्तिष्क बाधा पार गर्दछ। र कोलीनर्जिक न्यूरॉन टर्मिनलहरू लिन्छन्। यो न्युरोनमा उच्च उच्चता choline अपटेक (HACU) प्रणाली द्वारा लिन्छ। AC को संश्लेषण synaptic फांकमा हुन्छ। न्यूरॉनको बीचमा स्पेस जब यो न्यूरोनमा जान्छ।
HACU प्रणाली तापमान-, उर्जा-, र सोडियम-निर्भर छ। यो प्रणाली प्राथमिक माध्यम हो जसको माध्यमबाट एसीएच को संश्लेषणका लागि आवश्यक कोलोन न्यूरोनमा ढुवानी गरिन्छ। र यो निर्णायक न्यूरोट्रान्समिटरको उत्पादनमा दर-सीमित चरण हो। जब यो प्रणाली टुक्रिन्छ वा डिजाइन गरिएको जस्तो प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैन भने, तपाईंले मेमोरी, सिक्ने, र मस्तिष्क कुहिरोको समस्या अनुभव गर्नुहुन्छ।
Coluracetam ले यो प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दछ र यसलाई अधिक कुशलतापूर्वक काम गर्न मद्दत गर्दछ। वास्तवमा, यसले HACU प्रक्रियालाई बढावा दिने देखिन्छ। बिग्रिएको न्यूरन्समा पनि। न्यूरन्समा बढेको एसिटाइलकोइनले मेमोरी सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, अनुभूतिलाई बढावा दिन्छ र राम्रो निर्णय क्षमता प्रदान गर्दछ।
Coluracetam ले AMPA क्षमता सुधार गर्न पनि देखिन्छ। AMPA रिसेप्टर्स ग्लूटामेटबाट प्रभावित छन्। जो मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली मा सतर्कता र अनुभूति सुधार गर्न मा काम गर्दछ।
कोलोरासिटाम दुबै AMPA क्षमता र choline अपटेक वृद्धि को साथ काम गर्दछ। यो संयोजनले सेरोटोनिन स्तरलाई प्रभावित नगरी मुड डिसअर्डरहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
सेरोटोनिन सेलेक्टिव रिअपटेक इनहिबिटरहरू (एसएसआरआई) मूड डिसअर्डरहरू र डिप्रेशनसँग सामना गर्न अहिलेको प्राथमिकता दिइएको मुख्य प्रवाहको मेडिकल विधि हो। तिनीहरू हानिकारक साइड इफेक्टको सूचीको साथ आउँदछन्। र प्रत्येक उदास बिरामीको लागि काम गर्नुहुन्न।
अन्वेषकहरूले रिपोर्ट गरे कि कोलोरासेटम प्रमुख क्लिनिकल डिप्रेशन र चिन्ता डिसअर्डरको उपचारमा फाइदाजनक थियो। मस्तिष्कमा सेरोटोनिन स्तरलाई असर नगरी। र साइड इफेक्टहरू बिना जुन सेरोटोनिन विघटनको साथ जान्छ।
कोलोराकुमम उपयोग: खुराक र स्ट्याक केवल सन्दर्भको लागि
Coluracetam एक यौगिक हो जुन कुनै पनि खानामा फेला पर्दैन र हाम्रो शरीरले यसलाई उत्पादन गर्न सक्दैन। तसर्थ, यो अणुको लाभ उठाउनको लागि एक मात्र तरीका पूरक हो।
कोलोरासिटाम सामान्यतया पाउडर वा क्याप्सुल फारममा बेचिन्छ र मौखिक रूपमा लिन सकिन्छ। डोज पनि छिटो र अधिक कुशल शोषणको लागि sublingally (जिब्रो मुनि) लिन सकिन्छ।
किनकि कोलोरासिटाम एक विशेष शक्तिशाली एजेन्ट हो, यो सब भन्दा कम प्रभाव खुराकको साथ सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ। यदि तपाईंलाई फाइदा महसुस गर्नका लागि डोज बढाउन आवश्यक पर्दछ भने, यो क्रमशः गर्नुपर्दछ र m० मीग्रोगभन्दा बढी हुनुहुन्न।
कोलोरासिटाम गैर-विषाक्त हो र सुरक्षित र राम्रोसँग सहन गरिन्छ। त्यहाँ कम्पाउन्डसँग सम्बन्धित केही दुर्लभ साइड इफेक्टहरू मात्र छन्, जस्तै चिन्ता, टाउको, थकान र मतली। यी साइड इफेक्टहरू दुर्लभ हुन्छन् र सामान्यतया यो तब हुन्छ जब त्यहाँ एसिटिल्कोलीन संश्लेषणको लागि प्रयोग गर्न कोलोनको ठूलो पर्याप्त अग्रसर पोखरी हुँदैन। यसैले हामी सिफारिस गर्दछौं कि सिन्टिसिस-कोलोरासिटाम कोलोनसिटम कोलोन लेभल वर्धक जस्तै साइटिकोलिनको साथ सुरु गर्नुहोस्।
Coluracetam केहि ड्रग्स को साथ कुराकानी गर्न सक्छ, विशेष गरी ती NMDA रिसेप्टर को साथ कुराकानी। यसले कफ सप्रेसन्ट र एनेस्थेटिक्स समावेश गर्दछ। कोलिनेर्जिक प्रणालीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने अन्य पदार्थहरू, जस्तै मोतियाबिन्दु औषधी र निकोटीन, कोलोरासिटामको प्रभावको साथ पनि कुराकानी गर्न सक्छ। कोलोरासिटामले एन्टी-कोलिनेर्जिक ड्रग्सको प्रभावहरूको प्रतिकार गर्न सक्दछ (जस्तै केहि बेनाड्रिल, केहि एन्टिसाइकोटिक्स र पार्किन्सनको औषधी)।
कुनै पूरकको रूपमा, यदि तपाईं औषधीमा हुनुहुन्छ वा एक अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्था छ भने, यो कुनै पनि सुरु गर्नु अघि तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। पूरै शासन।
※ कसरी स्ट्याकहरूको Well With अन्य ड्रग्स
♦ कोलोरासिटाम एक फ्याट-घुलनशील अणु हो, त्यसैले यसलाई उत्तम नारियल वा एमसीटी तेल जस्तो स्वस्थ वसाले स्ट्याक गरिन्छ।
♦ कोलोरासिटाम पनि एक संग स्ट्याक हुनु पर्छ choline supplement जस्तै citicoline। Citicoline संश्लेषण को लागी उपलब्ध choline को पोखरी बढाउँछ। स्ट्याकले उपलब्ध choline (citicoline) लाई बढाउँदै र यसलाई acetylcholine (coluracetam) मा संश्लेषण गर्ने क्षमताले शक्तिशाली प्रभावहरू सिर्जना गर्न सक्दछ।
※ सिफारिश गरिएको खुराक: प्रति दिन 5-80०mg
हामी प्रति दिन ura-5० मिलीग्राम कोलोरासेटम बीच सिफारिस गर्दछौं।
कोलोरासिटामको लागि सुरक्षित माथिल्लो सीमा प्रति दिन m०mg हो। यद्यपि हामी सिफारिस गर्दछौं कि day 80mg प्रति दिन रहोस् किनकि उच्च खुराकको नतिजा मानिसमा पूर्णरूपले जाँचिएको छैन।
यी खुराकहरूलाई बिहान वा दिउँसो खुराकमा विभाजन गर्न इष्टतम हो। उदाहरणको लागि, बिहान १०mg को २०mg खुराक र दिउँसोमा थप १०mg।
पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार तपाईले डोसेज स्केलको तल्लो छेउमा सुरु गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा कम प्रभावकारी खुराकको सुरुवातले कुनै पनि नकारात्मक साइड इफेक्टको अनुभवको सम्भावनालाई कम गर्दछ।
Coluracetam साइड इफेक्ट
Coluracetam गैर-विषाक्त छ। त्यसैले राम्रोसँग सहनशील र सुरक्षित मानिन्छ। धेरै पहिलो पटक कोलोरासिटाम प्रयोगकर्ताहरूले थकान रिपोर्ट गर्छन् जुन प्राय: बढि बढि डोजबाट सुरू गर्ने परिणाम हो।
याद राख्नुहोस्, कोलोरासेटम तपाईको दिमागमा कोलोन अपटेक बढाउँदै काम गर्दछ। Choline एसिटिचोलिन को उत्पादन को एक अग्रदूत हो। यदि तपाईको प्रणालीमा पर्याप्त कोलाइन उपलब्ध छैन भने तपाईले यसका साइड इफेक्टहरू पनि महसुस गर्नुहुन्छ।
साइड इफेक्ट दुर्लभ छन् तर चिन्ता, थकान, टाउको दुखाइ, तंत्रिका र विषाणु हुन सक्छ। फेरि, साइड इफेक्ट प्रायः नोथ्रोटिक को असामान्य रूप देखि उच्च खुराक को परिणाम हो।
कोलोरासिटामको प्रयोगबाट टाउको दुख्ने सामान्यतया यो हुन्छ जब तपाईं यसलाई राम्रो कोलोन पूरकसँग मिलाउन बिर्सनुहुन्छ। टाउको दुख्ने तपाईको दिमागमा कोलोन घाटाको लक्षण हो।
अवलोकन - कोलोराकुमम
कोलोरासेटम नयाँ र कम रेसटम वर्गको कम सदस्यहरू मध्ये एक हो nootropics, तर यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूको साथ मनपर्ने छ।
यसले '' लर्निंग न्यूरोट्रान्समिटर '' एसिटिल्कोलीनको स्तर बढाउँदछ, जसले अनुभूतिलाई बढावा दिन सक्छ, र पशु अध्ययनहरूले देखाए कि यसले महत्त्वपूर्ण साइड इफेक्टबिना मेमोरी घाटालाई अफसेट गर्न सक्छ। यद्यपि कोलोरासिटाममा मानव-अनुसंधानको सानो दस्तावेज भए पनि, ती अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि यो चिन्ता र उदासीनताको लागि महत्वपूर्ण उपचार हुन सक्छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरू यसलाई भरपर्दो मुड लिफ्टर र मेमोरी एन्हान्सरको रूपमा विश्वास गर्छन् जसले तिनीहरूलाई राम्रो फोकस र एकाग्रता दिन्छ। अरूहरू भन्छन् कि यसले उनीहरूलाई "HD भिडीन" को बराबरी दिन्छ, र colorsहरू अझ उज्यालो बनाउँदछ, कन्ट्रास्टलाई अधिक गहन बनाउँदछ, र बत्तीहरू अधिक उज्यालो बनाउँदछ।
Coluracetam एक शक्तिशाली यौगिक हो, त्यसैले खुराक मात्रा कम छ, र यो छिटो अभिनय को रूपमा परिचित छ। यो एक डाईट्रीको रूपमा बेचिन्छ पूरै अमेरिकामा र कानुनी रूपमा क्यानाडा र बेलायतमा थोरै परिमाणमा आयात गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ कोलोरासिटामको बारेमा अझ धेरै सिक्न बाँकी छ, तर यो प्रायः प्रयोगकर्ताहरूका लागि सुरक्षित देखिन्छ जब उत्तरदायी रूपमा लिन्छ। यदि तपाईं आफ्नोलाइ केहि नयाँ र फरक थप्न रुचि राख्नुहुन्छ भने nootropic स्ट्याक, coluracetam विचार गर्न को लागी एक हुन सक्छ।
कोलोरासिटामसँग अनुसन्धानको विस्तृत मात्रा छैन, उपलब्ध अध्ययनहरूले यसको प्रयोगको लागि ठूलो क्षमता देखाउँदछ। यो सँगसँगै सँगै पछिल्लो-हालसालै जाँदै गरेको मुख्यधारको दौडतालमध्ये एक हो Fasoracetam। यद्यपि हालसालै एफडीएले एडीएचडीको उपचारका लागि फासोरासिटामको “विस्तारित” फारमलाई अनुमोदन गरेको छ।
 ब्राउजर डी। "न्यूरोजेनेसिस-स्टीमुलेटिंग कम्पाउन्ड्स मेजर डिप्रेसनको उपचारमा प्रतिबद्धता देखाउँदछ" मेडस्केप मेडिकल न्यूज सेप्टेम्बर २१, २०० 21
 मुराई एस।, सायटो एच। न्यूरल ट्रांसमिशन जनरल सेक्शनको जर्नल। १ 231 1994;; (((१): १-१-98.
 ताकाशिना के।, बेसोहो टी।, मोरी आर।, एगुची जे।, साइटो के। "MKC-231, एक choline अपटेक बृद्धि गर्ने: (२) संश्लेषणमा प्रभाव र AF2A- उपचार गरिएको मुसामा एसिटिल्कोलाइनको रिहाइ।" न्यूरोल ट्रान्समिशनको जर्नल (भियना)। २०० Jul जुलाई; ११ (()): १०२64--2008।
 बेसोहो टी।, तकाशिना के।, एगुची जे।, कोमात्सु टी। साइतो के। "एमकेसी -२231१, एक कोलोन-अपटेक बृद्धि गर्ने: (१) AF1A- उपचार गरिएको चूहोंमा दोहोर्याइएको प्रशासन पछि लामो समयसम्मको संज्ञानात्मक सुधार।" न्यूरोल ट्रान्समिशन (भियना) को जर्नल। २०० Jul जुलाई; ११ (()): १०१ -64 -२2008।
 अकैके ए।, मैदा टी।, कानेको एस, तमुरा वाई। "MKC-231 को संरक्षणात्मक प्रभाव, एक उपन्यास उच्च आत्मीयता choline अपटेक बृद्धि गर्ने, संस्कृत cortical न्यूरॉन्स मा ग्लुटामेट cytotoxicity मा।" फार्माकोलोजीको जापानी जर्नल। १ 1998 76 Feb फेब्रु;;2(२): २१ -219 -२२
 शिरायामा वाई, यामामोोटो ए, निशिमुरा टी, कटायामा एस, कावाहारा आर (सेप्टेम्बर २०० 2007) "कोलोन अपटेक बृद्धि गर्ने एमकेसी २ 231१ लाई पछिल्लो एक्सपोजरले फेन्साइक्लिडिन-प्रेरित व्यवहार घाटा र मुसामा सेप्टल कोलिनेर्जिक न्यूरन्सलाई घटाउँछ"। यूरोपीय न्युरोप्सीचोर्मोलोजी। १ (()): –१–-२।।
 योग्य क्यालिफोर्निया राज्य IRS.gov को लागि चिकित्सीय डिस्कवरी परियोजना अनुदान।
 माल्क, एजी, र सदाइ, एमआर (२०१०) Piracetam र Piracetam- जस्तै ड्रग्स। ड्रग्स, (० ()), २––-–१२।
कर्क्युमिन व्युत्पन्न J-147 एडी, एन्टि-एजिंग, डिप्रेशन डिसअर्डर (MDD)	लक्षित ड्रग्स इब्रुटिनिब: तपाइँ के जान्नुहुन्छ